Teknolojiyada RFID waxay isbedel weyn ku keentay maamulka bakhaarka. Iyada oo ay ugu wacan tahay xawaaraha akhriska / qorista, baaxadda akhriska dheer, awoodda keydinta badan iyo wareejinta xogta aaminka ah, waxay leedahay alread ...
Kiiska kufilan ee kaararka Aqoonsiga 'MIND rfid'
Kaarka Aqoonsiga RFID guud ahaan wuxuu adeegsadaa maadada PVC, laakiin sidoo kale wuxuu isticmaali karaa waxyaabaha ugu fiican ee ilaalinta deegaanka, sida PC, qalabka PETG sida waafaqsan shuruudaha macaamilka. MIND waa sii hormarin kartaa ...
kiiska bangiga smart ic smart
Kaarka bangigu wuxuu u qaybsan yahay kaarka xariijimaha birlabta iyo kaarka 'Smart IC card' oo ay ku jiraan kaarka 'IC chip card' iyo kaarka 'rfid card' sidoo kale waxaan ugu yeernaa kaarka 'icless contact ic card'. Kaarka bangiga Smart IC waxaa loola jeedaa kaarka leh ic chip a ...
Nidaamka maktabadda RFID
Iyada oo ku saleysan shahaadada nidaamka otomaatiga ah ee RFID Library, sahlanaanta, kartida ballaaran iwm, waxay ku baahisay dal iyo aad u badan. Dadku way amaahin karaan soona celin karaan buugga si fudud. Waxay casriyeyn kartaa li ...
Codsiyada RFID Gateways iyo Portal waxay hayaan o
Barnaamijyada 'RFID Gateways' iyo Xariirka 'Portal' waxay la socdaan alaabada socda, iyagoo ku meeleynaya goobaha ama hubinaya dhaq dhaqaaqa ay ku hayaan dhismooyinka. Akhristayaasha RFID, oo leh anteenooyin ku habboon oo lagu rakibay albaabka ...
RFID ee damaanad qaadka, soo celinta & dayactirka Alaabada la socoshada ee lagu soo celiyey damaanad ama kuwa u baahan adeega ama tijaabinta / cabbiraadda waxay noqon kartaa caqabad. Hubinta jeegagga saxda ah iyo shaqadu inay yihiin c ...
Kaarka xoqida ee PVC
Kani waa mashruuc gudoomiye in kaarka loogu talagaly isticmaalaha inuu adeegsado nambarka taxanaha ah iyo lambarka sirta ah si uu ugu soo galo degel si uu dib isu diiwaangaliyo. Waxaan si guul leh ugu guuleysanay mashruucan daabicitaankeena tayada wanaagsan leh ...
Waxyaabaha our waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in xalal kala duwan RFID xalalka in qaybaha kala duwan ee gaadiidka dadweynaha, iyo maaraynta maktabadda, aqoonsiga xoolaha, lacag iridda toll iwm Iyadoo fiican ...
NFC xalka Honda
Xalka NFC: MIND waxay saxiixday iskaashiga istiraatiijiyadeed ee HONDA markay ahayd 2017. Adoo adeegsanaya Kaarka MIND NFC (Isgaadhsiinta Goobta U Dhow), macaamilku si fudud ayuu u garaacaa taleefanka gacanta ee NFC ee karti u leh kaadhka en ...
Kaarka xubin magnetic iyo heysta
Ujeedadu waa macmiil u furay magaalada cusub ee cunnada cunnada ee Jabbaan waxay u baahan tahay wax soo saar buuxa oo ka mid ah warqadda xubinnimada, waxay rabaan inay u adeegsadaan nidaamka iyo kaarka xubinta inay isticmaalaan, dib u rartaan lacag, horumariyaan g cusub
Tiknoolajiyada RFID waxay u keenaysaa isbeddel weyn goobta keydinta iyo saadka. Iyada oo ay ugu wacan tahay xawaaraha akhriska / qorista, baaxadda akhriska dheer, awoodda keydinta badan iyo wareejinta xogta aaminka ah, waxay ...
Xalka keyword Hilton Marriott Hotel
Kaarka martida ee RFID Hotel VING / SALTO / BETECH / ADEL Bulshada casriga ah, kaararka RFID ayaa aad iyo aad ugu caansan nidaamka qufulka qolka martida. Sida mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee MIND RFID, MIND's Hotel RFID ...